သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၂၂) ~ Nge Naing
သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၂၂)
Saturday, March 17, 2012 Nge Naing9comments
တောခိုကျောင်းသားတွေ အကြောင်း ဓာတ်ပုံတွေ Eyewitness မှာ အပတ်စဉ်လိုလို ပါရှိခဲ့ပြီး သီဘောဘိုးစခန်းရောက် ဘုန်းတော်ကြီးတပါး AK 47 ကိုင်နေပုံ၊ မင်းသမီးစခန်းမှ ရဲမေတချို့ ၁၀ ပေ လောက်အမြင့်ရှိတဲ့ သစ်ပင် ၂ ပင်ကြားက ကြိုးတန်းပေါ်တွားသွားပြီး စစ်ရေးလေ့ကျင့်နေပုံတွေဟာ အဲဒီကာလက အတော်ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီကာလ ကျနော်တို့တပ်တွေ လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေကတော့ မြောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် နတ်အိမ်တောင်စခန်းမှာ အခြေစိုက်ပြီးမွန်ပြည်သစ်ပါတီနဲ့ KNU နယ်စပ် နတ်ကြီးစင်၊ ရာဖူး၊ ကံပေါက်၊ ကလိန်အောင်ကနေ ထားဝယ်မြို့ အရှေ့ဘက်ရှိ မေတ္တာကျေးရွာနားအထိကို ဘိုင်သိန်းမြင့် ဦးဆောင်တဲ့ တပ်ခွဲ (၂) က တာဝန်ယူထားပါတယ်။ မေတ္တာ၊ ဖေါင်းတောဒေသကနေ ဘန်းချောင်းဒေသ၊ သရက်ချောင်းဒေသ၊ ပလောက်၊ ပြည်ခြားအထိကို ကိုဘုန်းကျော် ဦးဆောင်တဲ့ တပ်ခွဲ (၃) က တာဝန်ယူထားပါတယ်။ ပြည်ခြား၊ ထမင်းမစားကနေ မြိတ်မြို့အနီးက ပပြင်၊ ကျွဲကူးဒေသတွေအထိကို ကိုဖေသင် ဦးဆောင်တဲ့ တပ်ခွဲ (၁) က တာဝန်ယူထားပါတယ်။ (မြိတ်အောက်ပိုင်းနဲ့ တနင်္သာရီဒေသမှာတော့ တပ်ရင်း ၂၀၃ က လှုပ်ရှားနေပါတယ်)။
(၂၀၁) တပ်ရင်း တပ်ခွဲ (၂) မှ ကျောင်းသား စစ်သည်တချို့ကို ရေး-ထားဝယ် ကားလမ်းပေါ်တွင် တွေ့ရစဉ်
တကယ်ကတော့ ကျနော်တို့ ကျောင်းသားတပ်တွေ လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသဟာ KNU တပ်မဟာ (၄) လှုပ်ရှားဒေသ သို့မဟုတ် အဲဒီကာလ ကျနော်တို့အခေါ် “အခြေခံဒေသ” တွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် နေရာအတော်များများမှာ ABSDF-KNU ပူးတွဲ လှုပ်ရှားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျောင်းသားတွေရဲ့ အားသာချက်ကတော့ အရင်ရှိပြီးသား KNU အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေ အနက်ရောင်ဒေသ၊ နှစ်ဖက်တပ်တွေ ရောက်လေ့ရှိတဲ့ အညိုရောင်ဒေသတွေကို ကျော်ပြီး မြို့ပြအနီးက အဖြူရောင်ဒေသလို့ခေါ်တဲ့ ကျေးလက်ဒေသဆီ ထိုးဖောက် စည်းရုံးနိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီကာလက ကျနော်တို့ရဲ့ စကားလုံးအတိုင်း ဆိုရင်တော့ “ကျေးလက်ကိုအခြေခံ မြို့ပြကိုဝန်းရံ” ပေါ့။ ထားဝယ်မြို့ပေါ်က ခလရ (၂၅) တပ်ရင်းကို လက်နက်ကြီးနဲ့ ၀င်ပစ်နိုင်ခဲ့ပြီး ထားဝယ်နဲ့ ၆ မိုင်အကွာ၊ ကျနော်တို့ တောစခိုစဉ်က ဖြတ်လာခဲ့ဖူးတဲ့ ရှင်မုတ္တီးရွာအထိဝင်ပြီး စည်းရုံးရေးတရား ဟောနိုင်ခဲ့တာတွေဟာ ထင်ရှားတဲ့ သာဓကတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တခါ ရေဖြူမြို့နယ်အလွန် နှမ်းကျဲကျေးရွာကနေ ရေးမြို့နယ်အ၀င် မလွဲတောင်အကြား ရေး-ထားဝယ် ကားလမ်းတလျှောက် မိုင် ၆၀-၇၀ ခန့်၊ သရက်ချောင်းမြို့နယ် အောက်ပိ်ုင်းကနေ မြိတ်မြို့အ၀င်နားအထိ မိုင် ၁၀၀ နီးပါးအရှည် ထားဝယ်မြိတ် ကားလမ်းပေါ်က ကျေးရွာတွေအားလုံးနီးပါးကိုလဲ KNU-ABSDF (နောက်ပိုင်းမှာတော့ DAB စစ်ကြောင်း) ပူးတွဲတပ်တွေက ထိမ်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကျနော်တို့ရဲ့ အမာခံရှေ့တန်း အခြေစိုက်စခန်းတွေဖြစ်တဲ့ ပြည်ခြား၊ လိပ်ဥသောင် ရွာတွေကနေတဆင့် ပင်လယ်ပြင်အထိထွက်ပြီး ထားဝယ်ကနေ ကော့သောင်ကြား ရေပြင်တလျှောက်ကိုလည်း ထိမ်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ ကာလတွေရှိခဲ့ဖူးတာကို ကျနော်မှတ်မိနေပါတယ်။
ကျနော်ဟာ နယ်မြေကော်မီတီမှာ တနှစ်ခန့် တာဝန်ထမ်းဖူးတယ်ဆိုပေမယ့် အထက်က လူတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်း ကျနော်တို့နဲ့ ရဲဘော်ထုကြား တိုက်ရိုက်ဆက်ဆံဖူးတာမျိုး မရှိသလောက်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အခု တပ်ရင်း (၂၀၁) ရဲ့ တပ်ထောက်ဗိုလ်ကြီးတာဝန် ယူရတဲ့အခါမှာတော့ ရဲဘော်ထုရဲ့နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရတာတွေ၊ အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စတွေနဲ့ အတော့်ကို အလုပ်ရှုပ်လာပါတယ်။ ရိက္ခာကို ၇ ရက်တခါ ထုတ်ပေးရပြီး အဲဒီလိုထုတ်တဲ့နေ့ဆိုရင် တမနက်လုံး မအားပါဘူး။
အဲဒီကာလ ရိက္ခာခွဲတမ်း နှုန်းထားတွေကတော့ ရဲဘော်တဦးအတွက် တနေ့ဆန် ၃ ဗူး (နို့ဆီဗူးခွက်နဲ့)၊ ဆား အကန့်အသတ်မရှိ၊ ငါးပိ၊ ဆီ၊ ပဲ၊ ငရုတ်သီး၊ ကြက်သွန်တို့ကတော့ အကန့်အသတ်နဲ့ အနည်းအကျဉ်းသာ ထုတ်ပေးနိုင်ပြီး ဟင်းလျာအတွက် ငွေတပြားမှ မပေးနိုင်ပါ။ ဒါဟာ BCG ကနေ မင်းသမီးစခန်းအတွက် တလတလ ဘတ်ငွေ ၅ သောင်း၊ ၆ သောင်းလောက်အထိ လှူဒါန်းနေတဲ့ အချိန်မှာရတဲ့ ခွဲတမ်းဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ အလှူငွေ ကျဆင်းတာနဲ့အမျှ ရိက္ခာခွဲတမ်းကလည်း တဖြည်းဖြည်း ထပ်နည်းသွားပါတယ်။
တပတ် ၁၀ ရက်လောက်နဲ့ တော်လှန်ရေးအောင်မယ်ထင်ပြီး တောခိုလာတဲ့ ကျနော်တို့ဟာ ဒီလို မလောက်ငှတဲ့ ရိက္ခာတွေကို တောထဲမှာ တွေ့သမျှ သစ်သီးသစ်ရွက်တွေ၊ ၀ါးမျှစ်တွေနဲ့ ပေါင်းစပ်၊ တောထဲမှာ တွေ့သမျှ တောကောင်တွေ၊ ငှက်တွေ၊ မျောက်တွေ၊ ခွေးတွေ၊ ကြောင်တွေ၊ မြွေတွေ၊ ကင်းတွေ၊ တောက်တဲ့နဲ့ ကင်းခြေများပါမကျန် စားလို့ရသမျှ စားစရာတွေကို ဖြစ်သလိုစားပြီး ၁၀ နှစ်နီးပါး ရှင်သန်နိုင်ခဲ့တဲ့ဘ၀တွေဟာ အခု နော်ဝေးနိုင်ငံလို တနေ့ခရိုနာ ငွေ ၁၀၀ (၁၈ ဒေါ်လာနီးပါး) စားစရိတ်အဖြစ် အသုံးပြုတဲ့နိုင်ငံက လူတွေသာဆိုရင် ကျနော်တို့လို မရှင်သန်နိုင်ဘဲ အားလုံးအဟာရ ပြတ်ပြီး သေကုန်မလားလို့တောင် စဉ်းစားနေမိပါတယ်။
BCG ကနေ တလ ၅ သောင်းကျော် ရတယ်ဆိုတာကလည်း ကျနော်တို့လက်ထဲ ငွေသားတွေ ပေးသွားတာမျိုး မဟုတ်ပါ။ ထောင်ဂဏန်းလောက်ကိုပဲ စီမံခန့်ခွဲမှုစရိတ်အဖြစ် ငွေသားထုတ်ပေးပြီး ကျန်တာ အားလုံးကိုတော့ သူတို့ကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီး ကန်ချနဘူရီမှာ ရိက္ခာတွေ ၀ယ်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှ ပြန်သိရတာကတော့ ဒီလိုငွေသားပေးလိုက်ရင် ကျောင်းသားတွေဟာ အဲဒီငွေကို ရိက္ခာမ၀ယ်ဘဲ လက်နက်ဝယ်မှာစိုးလို့၊ သူတို့ရဲ့အလှူငွေဟာ လူသားချင်းစာနာတဲ့ အကူညီသာဖြစ်တဲ့အတွက် စစ်ဘက်မှာ အသုံးပြုခွင့် မရှိဘူးလို့ သိရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီကာလကတော့ လူသားချင်းစာနာတဲ့ အကူညီလား၊ ဘာအတွက်ပေးတဲ့ အကူညီလည်း စဉ်းစားဖို့ အချိန်မရ။ သူတို့ဝယ်ပေးခဲ့တဲ့ ရိက္ခာတွေကို ပြန်ရောင်းပြီးဖြစ်စေ၊ တခြားနည်းနဲ့ဖြစ်စေ ရသမျှငွေတွေစုပြီး လက်နက်ဝယ်ရေးကိုပဲ အဓိကဦး စားပေးခဲ့ပါတယ်။
တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ဟာ သူပုန်စစ်သားကြီးတွေ၊ သူပုန်တပ်မတော်တွေလို့ ကိုယ်ဖာသာ ကြေညာထားပေမယ့် နိုင်ငံတကာအလှူရှင်တွေနဲ့ သတင်းထောက်တွေရဲ့ အမြင်မှာတော့ ကျနော်တို့ဟာ စစ်တပ်ရဲ့ဖိနှိပ်မှုကို မခံနိုင်လို့ နယ်စပ်ဆီထွက်ပြေးလာတဲ့ ကျောင်းသားဒုက္ခသည်လေးတွေလို့ပဲ သဘောထားပုံရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဘယ်နိုင်ငံကမှ လက်နက်နဲ့စစ်ရေး အကူညီမပေးဘဲ ရိက္ခာ၊ ဆေးဝါးနဲ့ စာအုပ်စာတမ်းတွေပဲ လာပေးနေတာ ဖြစ်ပုံရပါတယ်။
(၂၀၁) တပ်ရင်း မင်းသမီးစခန်းတွင် စစ်သင်တန်းတက်နေသော ကျောင်းသား ကျောင်းသူတချို့
တခါ ကျနော်တို့ ကျောင်းသားတွေကြားမှာလည်း နိုင်ငံတကာဘက်က အဲဒီလိုအမြင် ရှိနေတဲ့အပေါ် သဘောထား ၂ မျိုး ရှိနေပုံရပါတယ်။ ကျနော် မှတ်မိသလောက်ဆိုရင် အဲဒီကာလဟာ Asiaweek မဂ္ဂဇင်းရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံး ကာလတွေဖြစ်ပြီး အဲဒီမဂ္ဂဇင်းထဲက Eyewitness ကဏ္ဍဟာ ရေပန်းစားပါတယ်။ တောခိုကျောင်းသားတွေ အကြောင်း ဓာတ်ပုံတွေ Eyewitness မှာ အပတ်စဉ်လိုလို ပါရှိခဲ့ပြီး သီဘောဘိုးစခန်းရောက် ဘုန်းတော်ကြီးတပါး AK 47 ကိုင်နေပုံ၊ မင်းသမီးစခန်းမှ ရဲမေတချို့ ၁၀ ပေ လောက်အမြင့်ရှိတဲ့ သစ်ပင် ၂ ပင်ကြားက ကြိုးတန်းပေါ်တွားသွားပြီး စစ်ရေးလေ့ကျင့်နေပုံတွေဟာ အဲဒီကာလက အတော်ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီပုံတွေကိုကြည့်ပြီး “ကောင်းလိုက်တဲ့ပုံတွေကွာ။ ငါတို့ရဲ့လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲကို ကမ္ဘာသိအောင် ဆက်လုပ်ရမယ်” လို့ ဗဟိုနဲ့ နယ်မြေကော်မတီ ခေါင်းဆောင်တချို့က ပြောဆိုဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့ကတော့ “ပြဿနာပဲ၊ သေနတ်ကိုင်ထားတဲ့ပုံတွေ မီဒီယာမှာ ပေါ်တင်ကြီးပါလာရင် ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်၊ နိုင်ငံတကာအလှူတွေ လျော့သွားနိုင်တယ်” လို့ စိုးရိမ်မှုနဲ့ ပြောကြတာကိုလည်း ကျနော်အမှတ်ရနေပါတယ်။
ကျောင်းသားတပ်မတော်ဆိုတာ ကမ္ဘာမှာ တခုပဲရှိတယ်
ဒါက ရိက္ခာနဲ့ လက်နက်အပိုင်းပါ။ အုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကို ပြန်လှည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ တပ်ထောက်တာဝန် ယူနေတဲ့ ကျနော်ရော၊ စခန်းကော်မတီတာဝန်ယူနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရော အားလုံးဟာ အခု တန်းစီပြီး ဆန်လာထုတ်နေတဲ့ ရဲဘော်တွေနဲ့ အတန်းတူတူ၊ အသက်အရွယ် အတူတူနီးပါးတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပေးအပ်ထားတဲ့ တာဝန်အပေါ် ရဲဘော်ထုက လေးစာအသိမှတ်ပြုဖို့၊ အမိန့်နာခံဖို့အရေးဟာ အတော်အချိန်ယူခဲ့ရပါတယ်။ တပ်ဖွဲ့ဝင်အများစုကြီး ဒီလို သက်တူ၊ ရွယ်တူ၊ အတန်းတူတွေ ဖြစ်နေတာကိုက ကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲ့ထူးခြားချက်ဖြစ်တယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ကျနော်တို့အရင် တောခိုခဲ့တဲ့ ဟိုး လွတ်လပ်ရေးခေတ်ဦးကာလ ဗကပ (ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ) ခေတ်ကနေ ပြည်ချစ်ခေတ်အထိ၊ အခုကျနော်တို့ရဲ့ မဟာမိတ် KNU အပါဝင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အားလုံးမှာ အသက်ကြီးသူတွေ၊ ၀ါကြီးသူတွေက သူတို့ရဲ့ နောက်လိုက်တပည့်တွေကို ဦးဆောင်ပြီး တောခိုလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် ဗကပဆိုရင် လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု ကာလကတည်းက ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ပါတီကြီးဖြစ်ပြီး အဲဒီကနေ ပါတီအလိုက် တောခိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။
အလားတူ ပြည်ချစ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးဆိုရင်လည်း ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးနု၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်း ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်လက်ျာတို့လို အစဉ်လာကြီးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဦးဆောင်ပြီး တောခိုလာတဲ့အဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်။ KNU ဆိုရင်လည်း စောဘဦးကြီးကနေ အခု ဗိုလ်ချုပ်မြအထိ အစဉ်အလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေ မျိုးဆက်အလိုက် ဦးဆောင်လာတဲ့ သက်ကြီးဝါကြီး အဖွဲ့တွေဖြစ်လို့ အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စမှာ ကျနော်တို့လောက် မခက်ခဲဘူးလို့ ထင်မိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ ကျိုးဖိုးတပ်မတော်မှာတော့ ဒီလိုမဟုတ်။ အုပ်ချုပ်ရေးအတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး ၀န်ကြီးချုပ်တွေ၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တွေကို မဆိုထားနဲ့ ရွာသူကြီးလုပ်ဖူးသူတောင် ပါမလာဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သူကြီးပါလာရင်လည်း အဲဒီလူက သူကြီးလို့ ပြောရဲမှာမဟုတ်ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် မဆလမှာ တာဝန်ထမ်းခဲ့သူအားလုံးကို ကျောင်းသားတွေက အမြင်ကပ်နေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ ကျနော်တို့ အားလုံးနီးပါးဟာ အသက် ၂၀ ကျော်ကာစ လူငယ်တွေ၊ တက္ကသိုလ်က ဘွဲ့ရခါစ၊ ဘွဲ့ရခါနီးပုဂ္ဂိုလ်တွေ။ စိတ်ဓာတ်အရရော၊ ရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာအရရော ကိုယ်ထက်တော်သူတောင် ကိုယ့်လောက်မတော်ဘူးဆိုပြီး သွေးနားထင်ရောက်နေချိန်မှာ တောခိုလာတဲ့လူတွေဆိုတော့ အားလုံးဗိုလ်တွေချည်း ဖြစ်နေပါတယ်။
“မဆလကို မကြိုက်လို့ တောခိုလာပါတယ်ဆိုမှ ခင်ဗျားက မဆလစတိုင်နဲ့ အမိန့်လာပေး နေပြန်ပြီ” ဆိုပြီး တိုးတိုးတမျိုး၊ မကြားတကြားတမျိုး မကြာခဏ ကျနော်အပြောခံရဖူးပါတယ်။ “ကျောင်းသားတပ်မတော်ဆိုတာ ကမ္ဘာမှာ တခုပဲရှိတယ်၊ ဘယ်အဖွဲ့နဲ့မှ မတူနိုင်ဘူး၊ လွတ်လပ်တဲ့တပ်မတော် ဖြစ်တယ်၊ တင်းကျပ်တဲ့ စည်းကမ်းတွေမလိုဘူး” လို့ ပြောဆိုပြီး ထုတ်သမျှ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို မလိုက်နာနိုင်ဘူးလို့ လုပ်နေသူတွေကိုလည်း တွေ့ရဖူးပါတယ်။
ကျနော်မှတ်မိသလောက်ဆိုရင် အဲဒီအချိန်ထိ တောထဲမှာ ပေးခဲ့သမျှ သင်တန်းတွေထဲမှာ စစ်သင်တန်းနဲ့ နိုင်ငံရေးသင်တန်းလောက်ပဲ ရှိသေးပြီး အုပ်ချုပ်မှုအတတ်ပညာ သင်တန်းပေးတယ်လို့ တခါမှမကြားမိသေးပါ။ နိုင်ငံရေးပညာနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးပညာ ခပ်ဆင်ဆင်လို့ထင်ရပေမယ့် တကယ်ကတော့ မတူပါဘူး။ နိုင်ငံရေးသဘောတရား သိပ်တော်တဲ့လူတွေ အုပ်ချုပ်ရေးကိုင်တဲ့အခါ အဆင်မပြေတာတွေ၊ လူအများစုနဲ့ အဆင်ပြေအောင် မနေတတ်တဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေကို ကျနော်တွေ့ဖူးပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးပညာ လေ့လာမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီး စာအုပ်စာတမ်းတွေ လိုက်ရှာတော့ ဒေါက်တာမောင်မောင်ရေးထားတဲ့ “စီမံခန့်ခွဲမှု အတတ်ပညာ” ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ တပ်ရင်းစာကြည့်တိုက်မှာ သွားတွေ့ပါတယ်။
စစ်အာဏာသိမ်း တနှစ်ပြည့် ဆန္ဒပြပွဲ မင်းသမီးစခန်းတွင် ကျင်းပနေစဉ်
ဒါပေမယ့် စိတ်ဓာတ်တွေ သိပ်တက်ကြွလွန်းနေတဲ့ ကျနော်တို့ဟာ လူနဲ့စာ၊ သို့မဟုတ် မဆလ သမ္မတတာဝန် ထမ်းခဲ့ဖူးတဲ့လူနဲ့ အဲဒီလူရဲ့အတတ်ပညာကို သီးခြားစီ ခွဲမြင်နိုင်စွမ်းမရှိဘဲ မဆလ သမ္မတဟောင်း ရေးတဲ့စာအုပ်ဆိုရင်တော့ မဆလစနစ်လိုပဲ ဆိုးလိမ့်မယ်လို့ ကောက်ချက်ဆွဲလိုက်ပါတယ်။ စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ ပညာရပ်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေကို အသေချာမလေ့လာတော့ဘဲ စာရေးသူရဲ့အမည်ကို ကြားတာနဲ့ပဲ အဲဒီစာအုပ်ဟာ ပယ်စာရင်း ၀င်သွားပါတော့တယ်။
“အဲဒါကြီးနဲ့တော့ မဖြစ်ဘူးထင်တယ် ဟေ့လူ။ မဆလကို တော်လှန်ဖို့ ထွက်လာသူတွေကို မဆလ သမ္မတ ရေးထားတဲ့ စာအုပ်ကိုင်ပြီး သွားအုပ်ချုပ်ရင် ပြဿနာတက်လိမ်မ့ယ်” ဆိုပြီး ကျနော်တို့ အုပ်ချုပ်ရေး ကိုင်ရသူတွေကြား ငြင်းခုန်ကြတာကိုလည်း အမှတ်ရနေပါတယ်။ “အဲဒီစာအုပ်တွေ မလိုပါဘူးကွာ။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကောင်းဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ဘာမှ တတ်စရာမလိုဘူး။ တတ်ထားသူတွေကို စနစ်တကျ ခိုင်းတတ်ဖို့ပဲလိုတယ်” လို့ ပြောသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ဒါက အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ သဘောတရား အပိုင်းပါ။ ဒါပေမယ့် စစ်ရေးအပိုင်းမှာတော့ ကျနော်တို့ ကျိုးဖိုးတွေဟာ န၀တတပ်ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ အမိန့်နာခံမှုကို အားကျနေပြန်ပါတယ်။ မဆလ၊ န၀တ တပ်ထွက်တွေပေးတဲ့ စစ်သင်တန်းကို KNU ကပေးတဲ့ စစ်သင်တန်းထက် ပိုအလေးထားတာကို ကျနော်တွေခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီကာလက အသုံးများတဲ့ စကားလုံးအတိုင်းဆိုရင်တော့ “သဘောတရားပါတဲ့ အမိန့်နာခံမှု” အပေါ်အခြေခံထားတဲ့ တပ်မတော်မျိုးကို တည်ဆောက်ရမယ်လို့ ကျောင်းသားတွေကခံ ယူထားပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ကျနော်တို့ ကျိုးဖိုးတပ်မတော်ဟာ ရှေ့မှာတင်ပြခဲ့တဲ့ နောင်တော်သူပုန်တပ်မတော် အသီးသီးလို နိုင်ငံတကာဆီကလည်း စစ်ဖက်ဆိုင်ရာအကူညီ ဘာမှမရ၊ ရန်ပုံငွေလည်းမရှိ၊ အခွန်ကောက်ဖို့ နယ်မြေလည်းမရှိ၊ ဘာဆိုဘာမှကို မရှိတာပါ။ စားဖို့အတွက် ရိက္ခာကို အလှူရှင်ဆီက အလှူခံ၊ စစ်တိုက်ဖို့ သေနတ်ကို KNU ဆီက ၀ယ်ယူ၊ တောင်းယူ။ ဒါမှမဟုတ် ရှေ့တန်းမှာရှိတဲ့ န၀တ စခန်းတွေ၊ ရဲစခန်းတွေကို ၀င်သိမ်းပြီးရအောင်ယူ။ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအတွက် ယာဉ်တွေကို သူများဆီက အကူညီတောင်း။
ဒီလို ဘာမှမရှိတဲ့ တပ်မှာ ရှေ့ကရဲဘော်တွေ ပြောခဲ့တဲ့ စကားလုံးအတိုင်းဆိုရင် “ကမ္ဘာမှာ တခါမှ မပေါ်ဖူးသေးတဲ့ ပထမဆုံး ကျောင်းသားတပ်မတော်” မှာ ဗိုလ်လုပ်ပြီး နေ့စဉ် တပ်ရင်းလည်ပတ်ရေး ကိစ္စတွေကို တကယ်တမ်း ဦးစီးဆောင်ရွက်တဲ့အခါ တကယ့်ကို မလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာ။
The "Kachin Massacre" or "It’saJungle Out There" (1) says:
March 31, 2012 at 3:19 PM Reply
By Kyaw Zwa Moe, Naw Seng, and Ko Thet
JUNE, 2002 - VOLUME 10 NO.5
by အိုးဝေအောင် အိုးဘားမား
March 31, 2012 at 2:59am
The "Kachin Massacre" was committed in northern Burma by members of the All Burma Students’ Democratic Front (ABSDF), an armed group fighting the military. February 12th isadate of great significance for Burma. On that historical day in 1947, national hero Aung San and ethnic nationalities leaders signed the Panglong Agreement, which granted equality and national self-determination for all the people of Burma, and the date has been commemorated ever since. But on the 45th anniversary of what is now known as Union Day, in the jungles of Kachin State,agroup of Burmese democracy activists were murdered under shadowy circumstances in 1992.
The "Kachin Massacre" was committed in northern Burma by members of the All Burma Students’ Democratic Front (ABSDF), an armed group fighting the military regime from its bases along the border with China, Thailand and India. The victims? Not soldiers from the hated junta or their sympathizers; but 15 members of their own organization.
Lawlessness in the jungle is not new to Burma’s struggle against military dictatorship. In the 1960s, communist party members who took up arms in the jungle to fight the central government committed several purges against their own members.
But when an estimated fifteen ABSDF members were executed on charges of espionage in Pajau, Kachin State, it markedanew episode in Burma’s sometimes bitter internecine feuding.
The "Kachin Massacre" or "It’saJungle Out There" (2) says:
March 31, 2012 at 3:21 PM Reply
More than ten years later, many dissidents who still belong to the ABSDF are reluctant to discuss the crimes in the jungle for fear of opening old wounds as the incident has come back to haunt former ABSDF chairman, Dr Naing Aung.
Poised to study at Harvard University’s Kennedy School of Government later this year, Dr Naing Aung’s scholarship was deferred indefinitely after Harvard learned of his alleged role in the executions from protest letters sent by human rights activists and professed victims of the ABSDF’s crimes. In recent years, three former prominent ABSDF members have been granted scholarships at Harvard.
But questions over the judicial process and the guilt of the executed have resurfaced since the chairman was refused entry into the university. Dr Naing Aung, now the executive director of the Network for Development and Democracy (NDD), declined an interview with The Irrawaddy.
A former ABSDF colleague now living inaWestern country commented that Dr Naing Aung may not have ordered the killings but could be guilty of protecting the executioners. Aung Naing, who was then chairman of the northern ABSDF and is nowapolicy board member of the NDD, told The Irrawaddy that they executed 15 ABSDF members for working as spies for the military regime. He said about 80 members had been detained on similar espionage charges since mid-1991.
The excesses of Burma’s military intelligence services are well known, but many observers question why Rangoon would send suchalarge number of spies to one place. A more likely theory, they say, is that the executions werearesult ofapower struggle within the ABSDF.
The "Kachin Massacre" or "It’saJungle Out There" (3) says:
Reports from those who escaped from execution and fled to the Thai border said it was possible that some of the 80 suspects may have been spies, but the majority of those detained were genuine democracy activists.
Among those executed was Htun Aung Kyaw, chairman of the northern ABSDF until he was arrested for spying. During the 1988 democracy movement, he wasaprominent student leader in Mandalay, Burma’s second largest city, and wasavice-chairman of the All Burma Federation of Students Unions (Upper Burma) before he left for Kachin State. Htun Aung Kyaw’s outraged relatives and other activists in Mandalay want to keep those who ordered and committed the executions out of the city. "They are not welcome here," said one prominent Mandalay dissident.
However, the unsubstantiated evidence surrounding the executions has left the current ABSDF top brass inamessy and complex public relations imbroglio.
"I don’t want to give any comment on that incident at the present time," said Than Khae, present chairman of the ABSDF. When pressed further, he added, "The event will be very controversial even when it is solved in the future."
Aung Naing and other ABSDF members who were involved in the executions insist that they had substantial evidence and confessions to support their spy charges.
Other members and leaders of the ABSDF, however, maintain those claims are false and have denounced the killings.
Min Htay,amilitary trainer with the northern ABSDF at that time and currentlyarepresentative of the same group, said he was almost certainafew of the detainees were government moles, but knows of at least one woman arrested for espionage, Nan Saw, who was notaspy.
Nan Saw andalarge group of other suspected spies managed to escape execution. Many have since returned to Burma and others are now believed to be residing in western countries. Most could not be reached for comment.
The "Kachin Massacre" or "It’saJungle Out There" (4) says:
March 31, 2012 at 3:24 PM Reply
One prisoner who was not so lucky, however, was Maung Maung Kywe. He was first actively involved in the Basic Education Student Union (BESU), which was established in 1988, before later receiving military training with the ABSDF in Kachin State. Initially, Maung Maung Kywe joined the democracy movement to fight against the military regime, said his friend and former BESU colleague, Nay Lin, but was later executed with 14 others for being spies.
But some believe that the internal purges actually claimed many more lives. Moreover, some have come out recently admitting that suspects were tortured in detention. A senior ABSDF member, who was an eyewitness to the event, said that besides the 15 who were executed about five to 10 people died due to torture during the interrogation, including U Sein.
U Maung Maung Tate, who wasaformer political prisoner with U Sein in the 1970s, and is now the chairman of the ABSDF’s three-man central judiciary committee, said, "U Sein had very strong political beliefs in prison, so it is difficult for me to believe that he wasaspy."
Aung Naing said that U Sein died in detention from poor health, not torture. He did admit, however, that beatings and electric shocks were applied during the interrogation, but could not confirm how many died in detention.
Labya Laseng,amember of the central committee of the ABSDF in 1992, said that three detainees committed suicide during the interrogations. Others have said that some detainees who later escaped—including women—were tortured and now suffer severe mental illnesses asaresult.
ABSDF leaders in Kachin State explained that they approached international organizations such as the International Committee of the Red Cross (ICRC) and the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) to accept the detainees, but these organizations could not take any responsibility, although Amnesty International issuedarequest to stop the executions.
The "Kachin Massacre" or "It’saJungle Out There" (5) says:
March 31, 2012 at 3:25 PM Reply
Aung Naing, who has close ties with the former chairman, told The Irrawaddy that Dr Naing Aung had nothing to do with the executions: "The capital punishment was ordered by the central committee of the northern ABSDF though we informed the ABSDF central headquarters," explained Aung Naing.
"We had our own authority and the capital punishment was decided by eight members of the central committee of northern ABSDF, including Kyaw Kyaw, Than Chaung, Myo Win, Sein Aye, Aung Gyi, Nay Tun, Labya Laseng and myself."
At the time of the executions in 1992, the ABSDF was already divided into two rival groups: one headed by Moe Thee Zun and the other by Dr Naing Aung.
Aung Naing Oo, who served as spokesman of the foreign affairs department of the Moe Thee Zun group said, "We officially stated that we had no connection whatsoever with that incident and also denounced the atrocities."
A few years later, more atrocities in the jungle would follow. In one instance in 1997, Myo Win,asenior ABSDF member, ordered the execution of Soe Win on charges of "leaking information". But Myo Win failed to inform the central committee, thus stirring up more discontent within the organization.
Aung Naing Oo, who studied at Harvard’s Kennedy Schoolafew years ago, said that he had had enough and resigned from the ABSDF in 1999.
The "Kachin Massacre" or "It’saJungle Out There" (6) says:
March 31, 2012 at 3:28 PM Reply
Ina1999 interview with The Irrawaddy, Dr Naing Aung said that "even though we have the death penalty, we try to avoid it as much as we can since we have been blamed by international organizations about our executions with the spies."
When asked if he was comfortable with the decisions to execute former members, he said: "As the head of the organization, sometimes I’m not only worried, I’m afraid. Because in some situations [where] you have to take responsibility, you don’t really see what happened, and you have to rely on [others’] reports."
Nevertheless, many dissidents still believe that the ABSDF’s ugly past will continue to haunt their former leaders.
Some warn that Dr Naing Aung’s suspended admission to Harvard could be just the beginning of wider repercussions that will reach others in the dissident community who committed acts of injustice. Whether Harvard will continue its regular scholarship program with Burmese students is uncertain.
Aung Naing blamed the ABSDF’s judicial quandary on Burma’s pervasive militarism and weak education system: "Although we talked about democracy and human rights, we didn’t thoroughly realize what democracy and human rights meant. Our education system did not prepare us to understand those concepts."
For those who have fled Burma in opposition to the killing and persecution perpetrated by the military regime, some have been subjected to similar inhumanities on occasion within their own dissident groups during their 14-year struggle for democracy.
Dr Naing Aung’s recent collegiate setback has brought dissident injustices back into the spotlight, but getting eyewitnesses and other involved parties to recount the events openly isadelicate matter. For now, however, full disclosure of the ABSDF’s executions depends on whether Burma’s pro-democracy activists value "truth" over "camaraderie".
အိုးဝေအောင် အိုးဘားမား (HitTai OwayAung) facebook မှ ကူးယူ ဖော်ပြသည်။
The "Kachin Massacre" or "It’saJungle Out There" (7) says:
March 31, 2012 at 3:30 PM Reply
၂၀၀၂ ခုကဆို အဲဒါ ကြာပြီပဲ ကျွန်မ အခုမှ ဖတ်ရတယ်။ Tag ပေးတာ ကျေးဇူး ကိုအိုးဝေ။ အဲဒီအပိုဒ် ((((((Aung Naing, who has close ties with the former chairman, told The Irrawaddy that Dr Naing Aung had nothing to do with the executions: "The capital... punishment was ordered by the central committee of the northern ABSDF though we informed the ABSDF central headquarters," explained Aung Naing. "We had our own authority and the capital punishment was decided by eight members of the central committee of northern ABSDF, including Kyaw Kyaw, Than Chaung, Myo Win, Sein Aye, Aung Gyi, Nay Tun, Labya Laseng and myself." )))))) ကို အားလုံး တွေ့ကြမယ်ထင်တယ်။ ဒါနဲ့ဆို မီဒီယာမှာ ကျွန်မ တွေ့တာ သုံးခုဖြစ်သွားပြီ။ Tag ပေးတာ ကျေးဇူး ကိုအိုးဝေ။
ကိုထွန်းအောင်ကျော် အပါအဝင် ကျောင်းသားရဲဘော် ၁၅ ယောက်ကို သေဒဏ်ပေးပြီး အပြစ်ပေးဖို့ ABSDF မြောက်ပိုင်း ဗဟိုကော်မတီဝင် ၈ ယောက်က ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ says:
April 1, 2012 at 3:49 PM Reply
Aung Naing, who has close ties with the former chairman, told The Irrawaddy that Dr Naing Aung had nothing to do with the executions:
"The capital punishment was ordered by the central committee of the northern ABSDF though we informed the ABSDF central headquarters," explained Aung Naing.
(Kyaw Zwa Moe, Naw Seng, and Ko Thet
VOLUME 10 NO.5)
ABSDF ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ဒေါက်တာနိုင်အောင် နဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ အောင်နိုင် က "ဒေါက်တာနိုင်အောင် ဟာ သေဒဏ်ပေး ကွပ်မျက်ခဲ့မှုတွေနဲ့ မပတ်သက်ဘူး" လို့ ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။
"ကျနော်တို့က ABSDF ဗဟိုကို အကြောင်းတော့ ကြားတယ်၊ ဒါပေမယ့် ABSDF မြောက်ပိုင်း ဗဟိုကော်မတီဝင်တွေက သေဒဏ်ပေးပြီး ကွပ်မျက်ဖို့ အမိန့်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်" လို့ အောင်နိုင် က ရှင်းပြပါတယ်။
"ကျနော်တို့မှာ ကိုယ်ပိုင် အမိန့်အာဏာ ရှိပါတယ်။ သေဒဏ်ပေးပြီး အပြစ်ပေးဖို့ ကျော်ကျော်၊ သံချောင်း၊ မျိုးဝင်း၊ စိန်အေး၊ အောင်ကြီး၊ နေထွန်း၊ လဗျာလဆိုင်း နဲ့ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် ပါဝင်တဲ့ ABSDF မြောက်ပိုင်း ဗဟိုကော်မတီဝင် ၈ ယောက်က ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။"
(ကျော်စွာမိုး၊ နော်ဆိုင်း၊ ကိုသက်
၂၀ဝ၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ
အတွဲ ၁၀၊ အမှတ် ၅)
ကိုထွန်းအောင်ကျော် အပါအဝင် ကျောင်းသားရဲဘော် ၁၅ ယောက်ကို ၁၂-၂-၁၉၉၂ ရက်မှာ သေဒဏ်ပေးပြီး အပြစ်ပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ ABSDF မြောက်ပိုင်း ဗဟိုကော်မတီဝင် ၈ ယောက် စာရင်း says:
April 1, 2012 at 3:54 PM Reply
ABSDF မြောက်ပိုင်းမှာ ကိုထွန်းအောင်ကျော် အပါအဝင် ကျောင်းသားရဲဘော် ၁၅ ယောက်ကို စစ်အစိုးရက စေလွှတ်ထားတဲ့ သူလျှို ထောက်လှမ်းရေးတွေ လို့ မဟုတ်မမှန် စွပ်စွဲ ဖမ်းဆီးပြီး လပေါင်းများစွာ လူမဆန်စွာ ညှင်းပန်း နှိပ်စက်ခဲ့ပြီးနောက် ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက် (၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုနေ့) မှာ ABSDF မြောက်ပိုင်း ကချင်ပြည်နယ်၊ ပါဂျောင်ဒေသမှာ သေဒဏ်ပေးပြီး ကွပ်မျက်ဖို့ ရော်နယ်အောင်နိုင်၊ သံချောင်း၊ မျိုးဝင်း၊ လဆိုင်း အပါအဝင် ABSDF မြောက်ပိုင်း ဗဟိုကော်မတီဝင် ၈ ယောက်က ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။
ကိုထွန်းအောင်ကျော် အပါအဝင် ကျောင်းသားရဲဘော် ၁၅ ယောက်ကို ၁၂-၂-၁၉၉၂ ရက်မှာ သေဒဏ်ပေးပြီး အပြစ်ပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ ABSDF မြောက်ပိုင်း ဗဟိုကော်မတီဝင် ၈ ယောက်က -